Raha diso… mibebaha (Adis Abeba) | NewsMada
Fihaonana an-tampony etsy, fihaonana an-tampony eroa toa tsy hita anefa izay vokany hatramin’izao, ny vidim-piainana tsy mitsaha-miakatra, ny vahoaka mihasahirana andro aman’alina. Fantratra indray amin’izao fa any Adis Abeba ny filoha Malagasy manatrika fivoriana an-tampony. Tato anatin’ny telo taona, nifandimby nahazo an’i Madagasikara izao karazan-doza rehetra izao, niatomboka tamin’ny asa fampihorohoroana tetsy Anosy izay nahafatesana mpirahalahy, nandalo tamin’ny kere tany atsimo, asan-dahalo, ireo karazana rivodoza, ny hain-tany tsy mety misy orana sy ny marohafa tsy voatanisa.
Manoloana ireo rehetra ireo, mandeha be ny resaka na eny an-dalambe na hatraiza na hatraiza. Ny an’ny mpino, indrindra fa any ampiangonana dia tsy miova ny vetin-dresaka : « sazin’Andriamanitra io ». Mahagaga anefa fa ireo mpitondra anie toa mivavaka ihany e, hita tamin’ny sorona masina notarihin’ny sekreteram-panjakana ao Vatican, Pietro Parolin, tazana tamin’ny fanopoam-pivavahana nokarakarain’ny FJKM tetsy Antsonjombe, sns… Araka izany, tsy dia tena any loatra ity olana ity…
Resaka tsy fahaiza-mitantana ? mandeha indray ny resaka hoe : nefa anie izy toa olona mba nianatra ihany e! Dia maninona ary i Madagasikara no tahaka izao no manjo azy? Rehefa tena fotorina akaiky, biby iray manana loha maro ka samy manana izay tiany ho aleha i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Biby tsy misy lohany, hoy ny Ntaolo, tsy mandeha saingy raha biby maro loha loatra manjary mifamely « coup de tête » ampitoerana fotsiny. Amin’izao mantsy, efa tsy takona afenina intsony fa anarana sisa izany Rajaonarimampianina izany fa miara-mitondra ao daholo ny rehetra, Voahangy, Nicole, Herisoa, Mbola sns…
Ny fomba fanao tsy miova, lainga sy famitaham-bahoaka no betsaka. Voky fampanantenana ny vahoaka saingy noana vary, izay efa tafiakatra 2200ar ny kilao. Nidehaka ery talohan’ny fihaonan’ny frankofonia fa hitondra fiovana betsaka io, saingy aiza izany amin’izao? Fiovana tokoa moa izany, ny jiro tapaka adiny roa teo aloha lasa tapaka adiny efatra izany amin’izao. Ny vidim-bary 1400ar teo aloha lasa 2200ar izany amin’izao, ny saran-dalana 400ar teo aloha ho lasa 500ar izany amin’izao sns…
Dieny mbola any Adis Abeba, « raha diso mibebaha » fa ho henjana ity lalao ity. Aleo alan’andrina toa izay halam-bahoaka, hoy ny fitenenana.